Maalinta: Oktoobar 15, 2019
Buundada Qadka Tareenka ee 166 + 900 Maaddaama ay tahay Natiijada Tender Republic of Railways State Turkey. 2 / 2019 GCC qiimaha xaddidan ee Agaasinka Adeegga Iibsiga Gobolka (TCDD) waa 455487 TL iyo [More ...]
Adkeynta Tunniska No: 1 inta u dhaxaysa Ulukışla iyo Yenice Stations Tender Result Resender Result Result Maamulka Maamulka Railways Adana 6. 2019 / 467201 GCC qiimaha xadka 544.465,59 TL iyo qiyaasta qiyaasta Agaasinka Gobolka (TCDD) [More ...]
IETT ayaa beenisay wararka sheegaya in qaar ka mid ah baraha internetka ay soo iibsadeen qandaraas la'aan. İETT waxay ku dhawaaqday in hindisada laga naaqusay gaariga 175 loona rogo gaariga 140 iyo in 5 badbaadiyey nus milyan milyan habraaca sanadlaha ah. [More ...]
M. Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Dhaqaalaha, wuxuu sheegay inay sameynayaan qorshayaal mustaqbalka ah si ay u kordhiyaan soo caga-dhigashada iyo hoos-u-dhigga garoonka diyaaradaha ee Istanbul. [More ...]
Duqa Magaalada Paragliding ee Dowlada Hoose ee Magaalada Ordu 8 ayaa bilo kadib biloowday dadaalkii Mehmet Hilmi Güler. Paragliding waa mid ka mid ah meelaha adduunka ugu yar ee isboortiga iyo waqtiga ugu gaaban ee lagu gaari karo baabuurka fiilada [More ...]
Geedi socodka khariidadda Asphalt ee xadiiq gawaarida 188 ayaa lagu dhammeeyay baaxadda Mashruuca Dhismaha Wadada Vona Park ee ülen oo ay fulisay Dowladda Hoose ee Magaalada Ordu ee Magaalada Persembe. Iyada oo la raacayo mashruuca loo yaqaan 'asphalt' iyo dhul-beereedka [More ...]
Eskişehir degmada Metropolitan, Turkey ayaa tijaabiyay in magaalooyin kala duwan oo ku sii socda waddada, waxna lagama guul qaatay shaqada la taaban karo. Dhawaan ayaa la soo gabagabeeyey Cevizli-Bardakçı-Hankaraağaç-Gökçekuyu deriska oo daboolaya wadada xNUMX kiiloomitir la taaban karo ayaa hada ah [More ...]
Gebze Darıca Subway waxaa loo wareejiyay Wasaaradda laakiin Ama
Dhismaha khadka tareenka ee Gebze OSB-Darica waxaa loo wareejiyay Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha iyadoo go'aanka lagu daabacay wargeyska rasmiga ah bishii hore. Shaqooyinka iyo geeddi-socodka lagama maarmaanka u ah dhismaha khadka tareenka [More ...]
Waa maxay Xaaladda ugu dambeysay ee Mashruuca Sakarya Tram? ..
Waa maxay Xaaladda ugu dambeysay ee Mashruuca Sakarya Tram? .. Sakarya Metropolitan Municipal SBB Madaxweynaha Ekrem Yüce, ayaa ka hadashay shaqada la bilaabay in la keeno nidaamka tareenka magaalada Sakarya Metropolitan Assembly (SBB) Madaxweynaha Ekrem Yüce, Golaha Magaalo Weyn [More ...]